मनमायालाई डुबायो फसबुके प्रेमले: लभ, से’क्स अनि धोका
मनमाया खुसीसाथ उनलाई लिन एयरपोर्ट पुगिन्। त्यसपछि केही दिन उनीहरुको बास होटलमा भयो। मनमाया नयाँ सपनाका चाङ लिएर नुवाकोट फर्किइन्, भीम उदयपुर
बहराइनमा रहेका भीम सुबेदी नेपाल आउने कुरा भयो। मनमाया खुसीसाथ उनलाई लिन एयरपोर्ट पुगिन्। त्यसपछि केही दिन उनीहरुको बास होटलमा भयो। मनमाया नयाँ सपनाका चाङ लिएर नुवाकोट फर्किइन्, भीम उदयपुर पुगे। दुवैको फोन सम्पर्क र सञ्जालमा कुराकानी निरन्तर भैरह्यो। भीमले देखाएको विश्वास र इमान्दारिताको प्रभाव मनमायामा मजैले परेको थियो। त्यसैले उनले भीमलाई आफ्नो बनाउने पक्कापक्की गरिन्।
तर एक पटक भीम आमा बिरामी भएको बहाना गर्दै अन्य केटीहरु भेट्न गएको थाहा पाइन्।
मनमायाले यो कुरा भीम काठमाडौँ फर्किएपछि उनको म्यासेन्जर हेरेर थाहा पाएकी थिइन्। भीमलाई वास्तविकता पनि सोधिन् तर उनले पहिलेका कुरा भन्दै हाँसेर टारिदिए। त्यसपछि भने मनमायाको मनमा चिसो पस्यो। आफैँले घरबाट सबै समान लिएर आएर सल्लाहले बसेको प्रेमीलाई शंकाको नजरले हेरी हाल्न पनि उनले सकिनन् तर मन त हो कहाँ मान्छ र ?
उनले भीमका बारेमा चियो गर्न थालिन्। यसपछि मनमायाले भीमको कर्तुतको लाइनै फेला पारिन्। केटीहरुसँग डुल्ने बानी भएका भीम एकै ठाउँमा टिक्न पो कसरी सक्थे ! भीमले पहिला बोलेका कुरा एकपछि अर्काे झूट परिणत हुँदैगयो। भीमले मनमायाको विश्वास जित्न साथीभाइलाई समेत कोठामा ल्याए।
भीमले पहिले बिहे गरेका रहेछन् न त उनी विधुर रहेछन् ! अविवाहित छोराको बुहारीका रुपमा अचानक मनमाया हक खोज्दै उदयपुर पुगेपछि भीमको परिवारले स्वीकार गर्न चाहेन।
अहिले उनका साथीभाइ पनि अचम्म परेको मनमाया बताउँछिन्। इमान्दार छवि बनाएका भीमको असली रुप मनमायाको अघि उदाङ्ग हुन थाल्यो, उनी त्यति अलमलमा पर्न थालिन्। उनले भीमसँग छुट्टिने कोसिस पनि गरिन् तर सकिनन्। अन्ततः भीमले मनमायालाई थाहा नै नदिई सुटुक्क देश छाडे। पछि मनमायाले उनलाई फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि भीम सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। आए पनि मनलाग्दी बोल्न थाले।
यता मनमायाका पूर्वपतिसँग एक सन्तान पनि छन्। भीमले धोका दिएपछि उनले पूर्वपतिसँग आफ्नो ति’क्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गरे पनि असफल भइन्। यसपछि उनी भीमको घर खोज्दै उदयपुर पुग्दा उनले अर्को सरप्राइज फेला पारिन्, न त भीमले पहिले बिहे गरेका रहेछन् न त उनी विधुर रहेछन् ! अविवाहित छोराको बुहारीका रुपमा अचानक मनमाया हक खोज्दै उदयपुर पुगेपछि भीमको परिवारले स्वीकार गर्न चाहेन।
तीन चार महिनाभित्रै शर्मिला विनोदलाई भेट्न काठमाडौं आइन्। विनोदसँग केही समय सँगै बसेर पुनः बर्दिया फर्किएकी शर्मिलासँग विनोद टाढिदै गए।
सामाजिक सञ्जालमा भएका मीठा पिरतीका कुराकानीबाट मख्ख भएर घरै छाडेर हिँड्ने युवतीको संख्या बढिरहेको छ। सञ्जालको भर पर्दा बर्दियाकी शर्मिलाले पनि यस्तै अवस्था भोग्नु परेको छ। १७ वर्षकी शर्मिला (नाम परिवर्तन) कविता लेख्न हुरुक्क हुन्थिन्। फेसबुकका विभिन्न साहित्यिक समूहमा उनी निकै सक्रिय हुन्थिन्। कविता लेख्नु र फेसबुकमा पोस्ट्याउनु उनको दैनिकी थियो।
यसै क्रममा झापाका अर्का एक साहित्य अनुरागी २३ वर्षीय विनोद (नाम परिवर्तन)सँग उनी जोडिइन्। दुवैको रुचि साहित्य भएकाले नजिकिन समय लागेन। तीन चार महिनाभित्रै शर्मिला विनोदलाई भेट्न काठमाडौं आइन्। विनोदसँग केही समय सँगै बसेर पुनः बर्दिया फर्किएकी शर्मिलासँग विनोद टाढिदै गए। अन्ततः दुवैको बाटो अलग भयो।
यस्तै साउदी अरबमा बसेका नुवाकोटका २४ वर्षे कुमारले सामाजिक सञ्जालमा एक भियतनामकी युवतीसँग सम्बन्ध बढाए। परिवारले यो प्रक*रण थाहा पाएपछि उनलाई नेपाल झिकाए। चाँडै फर्किएर आउँछु भनेर भियतनामी युवतीसँग बिदाइको हात हल्लाएका कुमार पुनः फर्किन भने सकेनन्। त्यसपछि उनी घरपरिवारसँग यति चिढिए कि परिवारको शेखी झार्नकै लागि सामाजिक सञ्जालमा रहेकी अर्की एक विवाहित महिलालाई भा*ग्न नै मनाए।
हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय असरल्ल देखिएका घटनाका प्रतिनिधि पात्र हुन् यी। मनोविद् गोपाल ढकाल पछिल्लो समय प्रेममा आत्मियता हराउँदै गएको र एकअर्कालाई नबुझी सिधा सम्बन्ध राख्दा समाजमा अनेक वि*कृति बढेको बताउँछन्। यस सम्बन्धि बिस्तृत रिपोर्ट शुक्रबार साप्ताहिकमा इश्वर कुमार मैनालीले लेखेका छन् ।